I-21,5-intshi iMac ezandleni ze-iFixit Azinayo iprosesa ethengisiweyo kunye ne-RAM! | Ndisuka mac
Kule meko, siyothuswa kukugcwala kwe-teardown eqhele ukwenziwa yi-iFixit kuzo zonke iimveliso ezintsha ze-Apple. I-iMac entsha ye-4-intshi 21,5k iprosesa kunye nenkumbulo ye-RAM ayithengiswa kwibhodi yomama. Ngokuqinisekileyo ezi zezona ndaba zilungileyo kubasebenzisi abangafuni ukuthenga iMac ye-intshi ezingama-27, kuba ukuhamba kwexesha kuyakwazeka ukwenza uhlaziyo kwizixhobo nangona ziya kuhlala zinzima ngenxa yokubhitya kweMac Kwaye kuyakufuneka ukuyidibanisa iyonke ukuze ifike kwi-RAM.
Izixhobo ezikhethwe yi-iFixit ukwenza lo disassembly yile I-21,5-intshi ye-4K, ene-5GHz quad-core Intel Core i3 processor, i-8GB ye-2400MHz RAM, iRadeon Pro 555 yemizobo ene-2GB yememori yevidiyo, kunye ne-1TB 5.400-rpm hard drive. Ixabiso layo li-1.499 euro Kwaye inyani kukuba sijamelene neendaba ezimnandi kakhulu ngaphandle kwenqaku lokuba amanqaku afunyenweyo wokuphinda enze kwaye alungise emva koko yi-3 nje kwe-10.
Ukusukela kunyaka ophelileyo u-2012 asikayiboni i-21,5-intshi iMac enala macandelo ngaphandle kokufaka ngebhodi kwibhodi yomama kwaye ke ziindaba ezimnandi kakhulu ukuba ezi zinto zingathengiswa. Kwelinye icala, into engeyiyo kule iMac 4k intsha ukongeza kubunzima bokuqhaqha izixhobo ezingcakacileyo zokutshintsha, ukongeza okanye ukulungisa izinto ezikhankanyiweyo, kukuba ngoku iMac entsha (ubuncinci le modeli yesiseko se4k banayo iFixit) bayongeza imakrofoni enye ngelixa uguqulelo oludlulileyo sinezimbini kwaye abanazo Isidibanisi se-SSD kwiidiski.
Lonke inyathelo ngenyathelo ngenyathelo lokuqhaqha okwenziwe yi-iFixit inokufunyanwa kwi esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » iMac » I-iMac eyi-21,5-intshi iMac ezandleni ze-iFixit Abanayo iprosesa ethengisiweyo kunye ne-RAM!
I-watchOS 4 ifika neendaba ezimnandi, izicelo ezidweliswe kwi-Apple Watch